Akanjo → Akanjo fiasana • amboradara solosaina P&M matihanina
Ny mpiasa tsirairay dia tokony hiseho milamina satria izy no miasa amin'ny anaran'ny orinasa ary izy no solontenany. Shirts matetika izy io dia singa tsy azo sarahina amin'ny fitafian'ny asa birao, amin'ny teboka serivisy ho an'ny mpanjifa, amin'ny fandraisana, fa tsy hoe satria ampiasaina amin'ny toerana maro izy ireo
amin'ny indostria isan-karazany.
Akanjo avo lenta avy amin'ny mpamokatra poloney sy vahiny izy io. Ny fitaovana dia mahafinaritra amin'ny fikasihana, nozairina mafy, izay miantoka ny faharetany. Izany rehetra izany mba hahafahan'ny lobaka ampiasaina amin'ny asa andavanandro mandritra ny fotoana lava, izay misy ifandraisany amin'ny fanasan-dry zareo matetika, fa ny mpamokatra koa dia naka ny lanjany. Raha manaraka ny tolo-kevitra voasoratra amin'ny tag ny mpampiasa dia hanompo azy mandritra ny volana maro ilay akanjo.
Volavola tsy manam-potoana
Ao amin'ny fivarotanay pm.com.pl azo jerena lobaka asa ary lobaka mahazatra, modely kanto.
Moa akanjo tsy manam-potoana, ny olon-drehetra dia tokony hanana lobaka tsara kalitao farafaharatsiny. Mampiavaka azy ireo ny hakantony ary mety amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao koa ny manambatra azy ireo amin'ny fampiraisana kanto sy tsy dia ofisialy. ny fametrahana mazava tsara ny fanatanterahana mendrika ny fijerena manokana, satria ny pitsopitsony kely indrindra dia nodiovina hatramin'ny farany avo indrindra, izay hamaly ny andrasan'ny mpanjifa mitaky be indrindra. Ny akanjo dia misy amina endrika roa - misy tanany fohy sy lava.
Akanjo fiambenana sy ririnina
Shirts miasa Ny fararano sy ny ririnina dia miavaka indrindra amin'ny fiarovana tsara amin'ny mari-pana ambany sy ny rivotra. Ny akanjo dia miovaova isan-karazany, izy ireo koa miaraka amin'ny iray fanampiny, matevina fiakaran'ny maripanan'ny.
Noho ireo fiasa ireo dia azo hanaovana takalo takalo izy io volon'ondriko. Ny fampiononana ara-pahasalamana dia adika amin'ny fiadanam-po tsara kokoa, izay misy akony amin'ny fahombiazan'ny mpiasa.
Ny lobaka rehetra dia vita amin'ny fitaovana avo lenta. Mazava ho azy, amin'ny toe-javatra iainana mafana kokoa amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny lobaka dia azo hanaovana tsy voahidy T-shirt ambaniny. Ny bokotra somary nozairina tsara dia mampihena ny fahafahan'ny detachment tsy nahy. Amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny vokatra tsara kalitao, voadio amin'ny antsipiriany, azonao antoka fa fividianana mandritra ny vanim-potoana iray mahery.
Tena malaza izy ireo lobaka flannel, malefaka sy malefaka. Tombony lehibe dia ny fanapahana azy ireo, izay tsy miteraka tsy fahazoana aina eo am-piasana, ary noho ny fisisihana, tsy mila sosona fanampiny izy io.
Akanjo voaravaka volon'ondry REIS
Hatsarana amin'ny asa aman-draharaha
Akanjo kanto fiaingana sy fanompoana dia fifangaroan'ny famolavolana kilasika sy maharitra mateza. Ireo maodely izay azonao jerena ao amin'ny magazinay dia avy amin'ireo mpanamboatra mendri-kaja izay mandinika tsara ny antsipiriany sy ny fanjairana. Ny estetika mahavariana dia handika tsara amin'ny fandraisana mpiasa sy marika.
Zava-dehibe ny fisafidianana ny habe mety satria ny habe diso dia mety manasongadina ny lesoka ary amin'ny ankapobeny manohitra izany. Ilaina ihany koa ny mijery ny fitsipi-pitenenana, ny manify amporisihina amin'ny fahavaratra, ary ny matevina kosa raisina ho toy ny be sy ny maro - miasa tsara mandritra ny taona izy ireo. Ny fikarakarana ireo lobaka natolotra dia mora fotsiny, araho fotsiny ny torolàlana momba ilay marika, izay tsy mitovy amin'ny torolàlana momba ny fikarakarana mahazatra an'ity karazana vokatra ity.
Ny ankamaroan'ny lobaka, na akanjo kanto na miasa, dia azo asiana marika manokana amboradara amin'ny solosaina. Manana ny valan-tsininay manokana izahay, ka afaka manoro hevitra anao izahay amin'ny fomba fanatanterahana tsara kokoa ny marika, toerana hametrahana ny sary famantarana sy fanampiana amin'ny fisafidianana ny refin'ny amboradara.
Borda amin'ny solosaina amin'ny lamba